दान केन्द्रको दैनिकी | Purna Oli
गए राति मतपेटिका बुझाउने लामो लाइन कुरेर बसिरहेको थिएँ ।
यो कुराइले ममा व्यग्र छटपटी निम्त्याइरहेको थियो । वरिपरि कागजपत्र तथा निर्वाचन सामग्रीहरु परिसरभित्र कुल्चिइएका अवस्थामा देखिइरहेका थिए । तिनीहरुमध्ये एउटा वस्तुले मेरो ध्यान खिच्यो । टिपेर हेरेँ कसैले खसालेको पोलबुक रहेछ । कुल्चिइँदा कुल्चिइँदा गाता करिबकरिब सबै च्यातिएको अवस्थामा थियो । मतपेटिकासँगै अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने पोलबुक खसालिएको देखिएपछि सम्बन्धित मतदान अधिकृतलाई बुझाइदिन त्यस पोलबुकमा सम्पर्क नम्बर तथा नाम खोज्नथालेँ । सर्सर्ति हेर्दा सम्पर्क गर्न मिल्ने कुनै कुराहरु पनि उल्लेख गरिएको कतै भेट्टिएन । केही कुरामा अल्झिएर समय काट्नलाई समय पनि उब्रिएको र भित्रभित्रका कुराहरुबाट सम्बन्धित व्यक्तिको केही न केही पहिचान भेटिने आशाले मैले पोलबुकमा लेखिएका कुराहरु सबै पढ्न थालेँ । पोलबुक बुझेको मितिभन्दा केही अगाडिका दिनका दिनचर्यालाई समेत शुरु गरेर त्यस व्यक्तिले आफ्नो दैनिकी लेखेको रहेछ । दैनिकी यस्तो थियोः
२०७४ मंशिर १ गते
यो पटक चुनावमा मताधिकार रहेको जिल्लामा भोट हाल्न जानैपर्छ भन्ने अभूतपूर्व तथा दृढ इच्छाको जागरण । पारिवारिक सहमतिमा बसपार्क पुगेर मंशिर ५ गतेको लागि बिहान ६ ३० बजेको अग्रिम टिकट समेत लिने कार्य सम्पन्न ।
२०७४ मंशिर ५ गते
एकाबिहानै मोबाइल फोनको घंटी तारान्तर बजिरहेको । निकट नातेदार मोटरसाइकल दुर्घनामा परी घाइते हुनुभएकोले काठमाण्डुतिर लिइएको जानकारी । उहाँसँग उपचार तथा भेटघाट तथा केही अफिसियल कामको सिलसिलामा गृह जिल्लाको लागि लिइएको टिकट क्यान्सेल गरेर काठमाण्डौको टिकट लिई त्यतातिर प्रस्थान ।
२०७४ मंशिर ७ गते
मताधिकार रहेको गृहजिल्लामा जान काठमाण्डौमा रहेका गृहजिल्लाका मित्रहरुसँग परामर्श । बन्द तथा आसन्न निर्वाचन, यातायात साधनको समस्याको कारणले लामो रुटको आवागमनमा अवरोध भइरहेको जानकारी । काठमाण्डौमै बिलखबन्द ।
२०७४ मंशिर ९ गते
कर्मस्थलबाट चुनावमा कुनै पनि कर्चारीलाई विदा नदिनू भनी निर्देशन भएकोले विदा स्वीकृत नभएको फोनबाट जानकारी प्राप्त । मतदान कर्मचारीको रुपमा नाम परेकोले मंशिर १० गतेदेखि नै तालिम हुने समेत जानकारी । चुनावमा भोट हाल्न जान नपाएको नैराश्यतामा एकाएक उल्लेख्य रुपमा ह्रास । हर्षले गदगद । त्यसै दिन कर्मक्षेत्रको लागि फिर्ता ।
२०७४ मंशिर १२ र १३ गते
बडो ध्यान, लगनशिलता, उर्जा खर्च गरेर मतदान तथा सहायक अधिकृतको तालिम प्राप्त ।दक्षताको अर्को तह वृद्धि । तालिमभत्ताको रकम मोटै भएको तर परिवारलाई एकमुष्ठ दिने उद्देश्यले पाइन्टको भित्री खल्तीमा लुप्त ।
२०७४ मंशिर १४ र १५ गते
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरुको नाम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा टाँस गरेको जानकारी प्राप्त । अघिल्लो दिनभर खोजी गर्दा पनि नभेटिएकोले नैराश्यतामा अभिवृद्धि अर्थात् छानाबाट खसेतुल्य मनोभावको सिर्जना । चित्त नबुझी भोलिपल्ट बिहानैदेखि फेरि खोज्न गएको । दिउँसो ४ बजे बल्लतल्ल नाम फेला परेको । जिल्लाको सीमाक्षेत्रको ‘क’ केन्द्रको लागि मतदान अधिकृतकै रुपमा आफ्नो नाम देखेर उग्र दङदास । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा जस्तो गरीमामय पदहरुको निर्वाचनको लागि महान अवसर प्राप्तभएको अनुभूति । ३२ इन्चको छाति फुल्दैफुल्दै गएर ४२ इन्चसम्म पुगेको ।
२०७४ मंशिर १६ गते
मतदान सामग्रीहरु बुझ्न दिनभरिको लाइन । बेलुकातिर विभिन्न थरी सामानहरुले भरिएका ठूलाठूला पोकाहरु प्राप्त । सामान बुझ्नको लागि सहयोग गरिदिन खटिएका कर्मचारी लिष्टमा उल्लिखित प्रायः सबै कर्मचारीहरुसँग फोन सम्पर्क । कर्मचारीपिच्छे विभिन्न कारणहरु देखाई तत्काल सहयोग दिन उपस्थित हुन नसक्ने तर भोलिपर्सि परेको जिम्मा लिने र सहयोग दिने आश्वासन प्राप्त । कसैले पनि सहयोग नगरेपछि मंशिरको अन्तिम साताको जाडोमा पनि असिनपसिन ।
तालिमको क्रममा सिकेको ज्ञानको अकस्मात स्फूरण । ४ जनासम्म स्वयम् सेवक नियुक्ति गर्न पाइने असीमित अधिकार भएकोले ओसारपसारमा सहयोग गर्ने गरी कार्यसम्पन्न पश्चात् भुक्तानी दिनेगरी नजिकैको नाता पर्ने एकजना स्वयमसेवक नियुक्त । उसैको सहयोगमा त्यस दिनका निर्वाचन तथा घरायसी कार्यहरु सम्पादन ।
२०७४ मंशिर १७ गते
नियुक्तिपत्र बुझ्न निर्वाचन कार्यालयमा दिनभरिको लाइन । पेल्लमपेल, घचेडमचेड, उठबस तथा असिनपसिनका बाबजूद बडो थकित अवस्थामा नियुक्तिपत्र तथा निर्वाचन खर्च दिने कर्मचारीको डेस्कमा पहुँच । जीवनमा बिरलै समातेको परिमाणमा मोटो रकम प्राप्त । भित्रभित्रै उच्छादित हुन थालेको खुशीले सम्हालीनसक्नू । सबै परिश्रम थकावटहरु एकैचोटी भष्म । उक्त मोटो रकम कोटको भित्री खल्तीमा सिलबन्दी ।
२०७४ मंशिर १८ गते
एउटा कम्बल, तन्ना, आफूले सेवन गरिरहेका औषधिहरुसहित बडो उत्साहका साथ परिवारबाट बिदावारी । २/४ हजार काम चलाउने पैंसा छोडिदिनुहोस् भन्दाभन्दै टाढा के पर्छ के पर्छ भनी फकाइफुलाइ घरको अरु नगद पाँच हजार समेत थप । नवनियुक्त स्वयमसेवकको सहयोगमा कार्यालयबाट मतपत्रहरु समेत बरबुझारथ । सुरक्षाको प्रबन्ध सहित बेलुकीतिर केन्द्रमा पहुँच ।केन्द्रको वरिपरि एकदुई चिया पसल बाहेक खाना तथा नास्ता खुवाउने होटेलहरुको अभाव आदि परिस्थितिजन्य कारणहरु तथा दिनभरको थकानले मतदान केन्द्र रहेको स्कूलको धुलैनाम बेन्चमा भोकै लडान ।
२०७४ मंशिर १९ गते
बिहान खाना खाने प्रबन्धको लागि त्यसै केन्द्रको अर्को मतदान अधिकृतसँग छलफल । परापूर्वदेखि चलिआएका प्रचलनहरु बारे जानकारी खाना व्यवस्थापन र बुथ निर्माणको लागि त्रिपक्षीय सहमतिपत्रमा वाक-हस्ताक्षर ।
कोही पनि खटिएका कर्मचारीहरु सम्पर्कमा नआएको । त्रिपक्षीय समझदारी विपरीत बुथको लागि आवश्यक पर्ने बाँस तथा काठहरु बोक्न आफ्नो केन्द्रको तर्फबाट एकजना स्वयमसेवक र आफू समेत खटिई सङ्कलन । बडो परिश्रम र शिघ्रतासाथ बुथ निर्माण सम्पन्न । बुथको लागि बेन्च तथा टेबुलहरु सार्दासार्दा मतदान केन्द्रका दुई सदस्यीय टोलीको कम्मर झण्डैझण्डै भाँचिने अवस्थामा । तोकिएको ढाँचामा बुथ निर्माण भएकोमा सन्तुष्टिमा अभिवृद्धि र थकावटमा पुनः गिरावट ।
२०७४ मंशिर २० गते
बिहानै आफूले निर्माण गरिएको बुथ हेर्न जाँदा जिल्लाराम । त्यस केन्द्रमा अर्को केन्द्रका मित्रद्वारा कब्जा गरिएका बुझिने अभिलेखहरु टाँगिएका । आफूले निर्माण गरेको बुथमा किन यसो गरेको भन्दा उक्त टोलीद्वारा आफूलाई उल्टै आक्रमणको चेतावनी ।
खटिएका अन्य कर्मचारीहरुको पनि दिउँसोतिर आगमन । सर्वदलीय बैठक अभिमुखीकरण तथा कार्यविभाजन सम्पन्न । आफ्नो अझसम्म पनि बुथ निर्माण नभएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त । उनीहरुसमक्ष आफूले बुथ निर्माण हिजै गरे तापनि अर्कै टोलीले कब्जा गरिसकेको जानकारी खुलाउनु परेको । यो कुरा सुन्नेबित्तिकै उनीहरुमा क्रोधमा असीमित वृद्धि । झण्डै सीमा नाघ्न थालेको । आफूहरु स्थानीय भएकोले प्रत्याक्रमण गरिहाल्नुपर्ने सुझाव प्राप्त । चुनाव गराउन खटिएकाहरुले नै मतदान केन्द्रलाई रणभूमि तुल्याउनुभन्दा बरु सबै मिलेर अर्को बुथ निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएवापत उनीहरुबाट पानीमरुवाको उपाधिद्वारा विभूषित ।
स्वयमसेवकहरु राखिदिनको लागि विभिन्न मौखिक आवेदनहरु पेश । दोस्रो बुथबाट ‘क’ केन्द्रले नै आठजना स्वयम् सेवक राख्ने अधिकार बुझेर आएको खुलासा । नियुक्तिपत्र दिन चर्को दबाब । आफू यस केन्द्रको मुख्य मतदान अधिकृत भएको आत्मरतिसहित विभिन्न चरणका वार्ताहरुबाट उनीहरुका ६ जनासम्म स्वयमसेवक राखिदिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर ।
उनीहरुबाट बुथ निर्माणको लागि ठूलो रकम बुझेर आएकोले त्यहीमध्येबाट गर्नुपर्ने जिकिर तर आफूहरुको घरमा अति संवेदनशील र अति बाध्यात्मक कामहरु भएकोले छाड्न नमिल्ने भएकोले यो कार्यमा सहयोग गर्न नसकिने विभिन्न तर्कहरु पेश । बेलुका मासुभात, अति गोप्यखालको मदिरापानलगायतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिदिन दुवै टोलीका कर्मचारीहरु र स्वयमसेवकहरुबाट दबाबसहितको माग पेश र मुख्य मतदान अधिकृतबाट बाध्यात्मक स्वीकृति ।
२०७४ मंशिर २० गते बेलुका ७ देखि ९ बजेसम्म
६० जनाभन्दा बढी सरोकारवालाहरुको भव्य उपस्थितिमा मासुभात सहितको मनोरञ्जनात्मक प्रितिभोज ।
२०७४ मंशिर २० गते बेलुका ९ देखि १२ बजेसम्म
भोलि बिहान ५ बजे नै आउने गरी नवनियुक्त स्वयमसेवक तथा कर्मचारीहरुको प्रस्थान । खानापश्चात् एकदुईजना बाँकी रहेका कर्मचारी र पूर्व नियुक्त स्वयमसेवकको सहायताबाट पुनः बुथ निर्माणकार्य सम्पन्न ।
२०७४ मंशिर २१ गते बिहान १ देखि ३ बजेसम्म
निर्वाचनको लागि तोकिएका आवश्यक तथा जरुरी मुचुल्काहरु भर्ने कार्य सम्पन्न ।
२०७४ मंशिर २१ गते बिहान ४ देखि ६:३० बजेसम्म
मतदान केन्द्रमा मतदान सामग्रीहरु व्यवस्थित रुपमा राख्ने कार्य सम्पन्न ।
२०७४ मंशिर २१ गते बिहान ६:३० देखि ६:५९ बजेसम्म
निवासको लागि प्रस्थान गरेका तथा बिहान ५ बजे नै उपस्थित हुन जानकारी गराइएका कर्मचारीहरु तथा निर्वाचन प्रतिनिधिहरु प्रवेश गर्न शुरु । आउनेहरुले ७ बजे नै निर्वाचन शुरु हुनुपर्नेमा सात बजिसके पनि मतदान हुन शुरु नभएकोमा रोष प्रकट । मतपत्र खोल्ने तथा मतपेटिकाको बिर्कोमा शिल लगाउने कार्य सम्पन्न ।
२०७४ मंशिर २१ गते बिहान ठीक ७:०० बजे
मतदान केन्द्र ‘क’ को निर्वाचन प्रारम्भ । दोस्रो केन्द्रले मतदान शुरु नगरेको र अझै आधा घण्टा समय लिन सक्ने सम्भावना सहितको गुनासो निर्वाचन तथा मतदान प्रतिनिधिहरुबाट मुख्य मतदान अधिकृतसमक्ष पेश ।
२०७४ मंशिर २१ गते बिहान ८:०० बजे
निर्वाचन सुचारु । स्वयमसेवक कर्मचारीहरु मतदान प्रतिनिधिहरु तथा केही मतदाताहरुको लागि पालैपालो चिया तथा खाजाको व्यवस्थापन ।
२०७४ मंशिर २१ गते बिहान ११:०० बजे
निर्वाचन सुचारु । स्वयमसेवक, कर्मचारीहरु, मतदान प्रतिनिधिहरु तथा केही मतदाताहरुको लागि पालैपालो खानाको व्यवस्थापन । तर मुख्य मतदान अधिकृत स्वयम चिया तथा खाना खाने फूर्सदबाट बञ्चित । तथ्याङ्क फाराम तथा विभिन्न मतपत्रहरुमा क्रमिक तथ्याङ्कमा फरक आएकोले जाँचपड्ताल । मतपत्रहरुको नै कतै सिरियल बिग्रिएका र कतै छुट भएको देखिएपछि केही समयसम्म गञ्जागोल । तनावमा अस्वाभाविक वृद्धि । माथिबाटै बिग्रिएकोलाई सुधार्न धौ धौ । सो को लागि मुचुल्का निर्माण । मतदान सुचारु रहेकोले मतदान समाप्तीपछि प्रतिनिधिहरुले मुचुल्कामा सही गरिदिने आश्वासन प्राप्त ।
२०७४ मंशिर २१ गते दिउँसो १:०० बजे
निर्वाचन सुचारु । सरोकारवालाहरुको लागि पालैपालो चिया तथा खाजाको व्यवस्थापन ।
२०७४ मंशिर २१ गते दिउँसो ३:०० देखि अपरान्ह ४:५९ बजेसम्म
निर्वाचन सुचारु । स्वयमसेवक, कर्मचारीहरु, मतदान प्रतिनिधिहरुबाट आफूखुशी मिनरलवाटर, चिया तथा खाजाहरु मगाएर वितरण गर्ने कार्य प्रारम्भ ।
२०७४ मंशिर २१ गते अपरान्ह ठीक ५:०० बजे
निर्वाचनको समय समाप्त । मतदान केन्द्रमा छिरेका सबै मतदाताहरुले मत दिइसकेकोले निर्वाचन सम्पन्न भएको घोषणा । बिर्कोमा सिल लगाउने र मुचुल्कामा सही गराउने कार्य शुरु र ५ मिनेटमा समाप्त ।
२०७४ मंशिर २१ गते अपरान्ह ५:०५ देखि ५:१० सम्म
सरोकारवालाहरु (स्वयमसेवक, कर्मचारीहरु तथा मतदान प्रतिनिधिहरु) बाट प्रयोगमा आएका र नआएका निर्वाचन सामग्रीहरु आआफूले लैजान पाउनुपर्ने भन्दै खोसाखोस र हानथाप शुरु । निर्वाचन कार्यालयहरुमा बुझाउनैपर्ने मुचुल्का तथा कागजातहरु खोसाखोसबाट जोगाउनैमा मुख्य मतदान अधिकृतलाई हम्मेहम्मे र सास्ती ।
२०७४ मंशिर २१ गते अपरान्ह ५:११देखि ५:१२ सम्म
मतदानमा खटिएका कर्मचारीहरु आफनो बुथका ७ जना र अर्को बुथका एकदुई स्वयमसेवकलाई समेत दिनगन्ति गरेर पारिश्रमिक दिई मुख्य मतदान अधिकृतको हैसियतले उनीहरुको विदाइ ।
२०७४ मंशिर २१ गते अपरान्ह ५:१३ देखि ५:२० सम्म
मतपेटिका लानको लागि गाडी आएर गेटमा कुरिरहेको सुरक्षाकर्मीहरुबाट जानकारी । यदि पाँच मिनेटभित्रै मुचुल्काहरु सिलबन्दी नगरेमा ‘क’ को मतदान अधिकृतलाई छोडेर जाने चेतावनी । बाँकी रहेका एकजना मात्र स्वयमसेवकको सहयोगमा हतारहतार मुचुल्काहरु सिलबन्दी ।
२०७४ मंशिर २१ गते साँझ ५:२० देखि ५:३० सम्म
निर्वाचनका प्रारम्भिक दिनहरुदेखि हालसम्मका खाना खाजा लगायतका दुवै बुथका बिलहरु आउन प्रारम्भ । बिलको रकम देख्दैमा अत्यासले मुटू फुट्ने सम्भावना बढ्दै गएको । पाइन्ट तथा कोटका भित्री खल्तीका गुप्त रकम तथा घरबाट थपेर ल्याएको रकमको कूल गठजोडबाट मुख्य मतदान अधिकृतको हैसियतले बल्लतल्ल खर्च व्यवस्थापन ।
२०७४ मंशिर २१ गते साँझ५:३५
पूर्व नियुक्त स्वयमसेवक आफू बस्ने कोठाबाट आँशु पुछ्दै आफ्नो अगाडि प्रवेश । मतदान गतिविधिको शुरुदेखिकै प्रत्यक्षदर्शी स्वयमसेवकले आफ्नो पारिश्रमिक नपाउने करिबकरिब सत्य नै भइसकेको पीडाले रोएको हो कि भन्ने आशंकामा वृद्धि । तर सोधनी गर्दा उसले आफ्नो घरबाट ल्याएको सामान सहितको झोला र मेरो समेत कम्बल, तन्ना, फेर्नको लागि ल्याइएका कपडाहरु दाँत माझ्ने ब्रस, दाह्री काट्ने मेशिन समेत बाँकी नराखी हराइसकेको गुनासो पेश । उसलाई थामथुम पार्दा आफ्नो समेत आँशु पुछ्नुपर्ने बाध्यता ।
२०७४ मंशिर २१ गते साँझ ५:३६
केही निर्वाचन तथा मतदान प्रतिनिधिहरुबाट आफूहरु सबैलाई प्रतिनिधि भत्ता चाहिन्छ भनेर कडा खालको दबाब प्रस्तुत । यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी क केन्द्रले नै लिएको दोस्रो मतदान अधिकृतबाट उनीहरुलाई उक्साहट । त्यस्तो भत्ताको व्यवस्था नभएको जानकारी गराउँदा ठीक पारी छोड्ने धम्की सहित हातपात शुरु । उनीहरुबाट फुत्केर सुरक्षाकर्मीहरुको बीचमा पुगेपछि राहत महशुश ।
२०७४ मंशिर २१ गते साँझ ५:३७देखि राति ११:३० सम्म
आँशु पुछिरहेको स्वयमसेवक र आँशु रोकिरहेको म मुख्य मतदान अधिकृत दुवैले एकअर्कालाई अँगालो हाल्दै बढ्दै गएको चीसोमा लुगलुग काँप्दै आफू र मतपेटिकाहरु लैजाने गाडी आउने चीर प्रतिक्षामा ।
२०७४ मंशिर २१ गते राति ११:३० देखि राति २:०० सम्म
मतपेटिका बोक्ने गाडी आएपछि निर्वाचन कार्यालयतिर प्रस्थान । निर्वाचन कार्यालयको गेटबाट स्वयमसेवकलाई घर जानको लागि विदाइ । घर जाने दुवैसँग पैँसा र रातिमा गाडी समेतको प्रबन्ध नभएकोले ‘भोकै हिड्दै जा !’ भन्ने मेरो सुझाव । विदाइको क्रममा ऊ डाँको छोडेर रुन थालेकोले ‘चिन्ता नगर, तेरो पारिश्रमिक घर पुग्ने बित्तिकै दिइहाल्छु नि’ भन्ने आश्वासन प्रदान । उसले ‘तपाईँको समस्या मैले बुझेको छु । म मेरो पीडाको कारणले होइन, हजुरकै पीडा देखेर रोएको हुँ । मलाई पारिश्रमिक नदिनुहोला’ भन्ने उसको अनौठो लाग्ने अभिव्यक्तिबाट घायल । त्यो सुनेर डाँको छोडेर रुने पालो आफ्नो ।
२०७४ मंशिर २२ गते राति २:१० बजे
पोलबुक बाहेक आफूसँग खाममा बुझाउनुपर्ने तथ्याङ्क फाराम तथा अनुसूची ६० समेत बाँकी नरहेकोले मतपेटिका कसरी बुझाउने होला भन्ने चिन्तामा अभिवृद्धि । त्यो चिन्तालाई तल पारेर अब धोती न टोपी भएर घर कसरी जाने भन्ने अर्को चिन्ताले घेरेर अत्यास र छट्पटीको क्रमबद्ध शुरुवात ।
त्यसैले …………… गर्नुपर्छ कि भन्ने निचोडसम्म नपुगिसकेको अवस्थामा मुख्य मतदान अधिकृत ।
उक्त पोलबुकमा लेखिएको सबै कुरा पढिसक्दा पनि कतै पनि त्यस मतदान अधिकृतको परिचय खुल्ने कुनै जानकारी उल्लेख गरिएको भेट्टाउन सकिन । उसको अवस्थालाई कल्पना गरेपछि आफ्नो अहिलेको व्यग्र पर्खाइ त केही रहेनछ भन्ने लाग्यो । कम्तीमा आफूले त यस्तो हविगत बेहोर्नुपरेनछ भन्ठान्दै लामो निश्वास छोडेँ ।
त्यस पोलबुकलाई सम्बन्धित व्यक्तिले खोजी गर्दै आउँदा भेटियोस् भनी भेटिएको ठाउँको दायाँपट्टि रहेको बगैँचाको गुलाबको बोटमाथि राखिदिएँ ।
के यो पोलबुकमा लेखिएको दैनिकी साँच्चिकै साँचो नै होला कि कल्पना मात्र होला ? दैनिकीको अन्तिम वाक्यमा केही लेख्नलाई खाली ठाउँ छोड्नुको तात्पर्य के होला ? भन्ने जस्ता चौतर्फी प्रश्नहरुले दिमाग चाट्न थाले ।
If anyone has any weakness, make it your duty to fill that gap. To speak about someone’s weakness is not greatness. The greatness lies in removing that weakness. – info@brahmakumaris.org 128,612 total views, 84 views [...]
निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३८ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित अनुसूची-१२ अनुसार सरुवा भई जाने कर्मचारीहरुलाई दिइने सरुवा-पत्रको ढाँचा आवश्यक परे निम्नानुसारको फाइल हेर्नुहोस् । Ramana Patra (Modified) 60,723 total views, [...]
पहेँलो बाटो हुँदै गन्तव्यमा पुग्नुहोस् Maze-Game 60,973 total views, 84 views [...]